Dagaal u dhaxeeyay Ciidmada Dowladda iyo kooxda Al-shabaab ee Gobolka Shabeelaha Hoose – Walaal24 Newss
Dagaal u dhaxeeyay Ciidmada Dowladda iyo kooxda Al-shabaab ee Gobolka Shabeelaha Hoose
March 21, 2019	0	By walaal24
Wararka naga soo gaaray Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa laga soo sheegayaa dagaal u dhaxeeyey ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo dhinac ah iyo ururka Al-Shabaab, waxana uu xalay ka dhacay deegaanka Buulo Mareer ee gobolka Shabeellaha Hoose, gaystayna khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac
Dagaalka ayaa yimid kadib markii dagalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhigyo ciidamo ka tirsan kuwa dowladda iyo AMISOM, waxana halkaasi ka dhacay dagaal culus oo muddo saacado ah qaatay sida ay sheegeen dadka deegaanka.
Dagaalka ayaa sida aan wararka ku helayno lama oga qasaaha ka dhashay xiliga uu dagaalka dhacay uu ahaa xili habeen, dhinacyada ku dagaalamay deegaanka Buulo Mareer oo hoostaga degmada Kuntuwaareey ee gobolka Shabeellaha Hoose.
Saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo aan la xiriirnay ayaa waxa ay sheegeen inay iska difaaceen weerarkii kaga yimid dhinaca ururka Al-Shabaab isla markaana khasaare ay ku gaarsiiyeen.
Wararkii ugu dambeeyey ee saaka naga soo gaaraya deegaanka Buulo Mareer ayaa waxa ay sheegayaan in ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ay wadaan dhaq dhaqaaqyo ciidan, iyaga oo dadka deegaanka ay sheegayaan in mararka qaar ay rasaas maqlayaan walow uusan dagaal jirin.
Ururka Al-Shabaab ayaa mararka qaar waxaa ay weeraro ku qaadaan saldhigyada ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM ku leeyihiin qaar ka mid ah gobolada dalka, waxaan dagaalka xalay ka dhacay Buulo Mareer uu kusoo aadayaa xilli shalay Al-Shabaab ay weerareen degmada Ceelwaaq ee gobolka Gedo.
Guddiga Joogtada Golaha Shacabka oo shaaciyay xiliga uu furmayo kalfadhiga 5-aad ee Golaha
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka XFS oo Khudbad ka jeediyay shir looga hadlayo ka hor-tagga Xag-jirnimada
Madaxweyne Farmaajo oo shirkii wadatashiga ahaa ka furay magaalada Garoowe ee caasimada Puntland
Madaxweynaha Jubbaland oo shir gudoomiyay kulan looga hadlaayay amniga oo Kismaayo lagu qabtay